Pure freemium nke ezi ihe na Golf Clash na ọtụtụ egwuregwu ya na ntanetị | Gam akporosis
Soro ọtụtụ puku ndị egwuregwu na-ekpori ndụ Golf Clash
Imirikiti egwuregwu ndị anyị na-akụziri gị bụkarị ihe ọhụụ, dị ọhụrụ site na oven, ma e wezụga ụfọdụ ndị anyị nwere ike ịhapụ na ha na-emebi ihe niile dịka o si eme na Nsogbu Golf.
Egwuregwu golf egwuregwu nke anyị ga-eche ihu na «ezigbo oge» megide onye ọkpụkpọ ọzọ na nke anyị ga-eburu n'uche nrụrụ nrụrụ nke mbara ala mgbe anyị na-agba bọl golf anyị. Site na nde nyocha, anyị ga-eme ya site na igwe ọtụtụ ndị na-agba n'ịntanetị nke freemium nke a na-egwuri egwu ebe niile na-anata mmelite ọ bụla ntakịrị.
1 Mee otu uzo maka oghere na Golf Clash
2 Kwalite klọb gị ma mepee sekit ọhụụ
3 Na ịkwụ ụgwọ iji merie
Mee otu uzo maka oghere na Golf Clash
Ihe ijuanya gbasara Golf Clash bụ onye na-ejighi ihe egwuri egwuNa na ọ bụ ihe egwuregwu nke a na-eme ka ihe ndị dị na ya wee mepụta ahụmịhe egwuregwu nke anyị nwere ike iji mee ihe na-enweghị nkụda mmụọ.
Anyị na-ekwu na ọ naghị eji ihe egwu egwu n'ihi na mgbe anyị ga-eweli ihe anyị ga-eme na klọb golf anyị, ọkachasị mgbe anyị nọ n’elu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, anyị ga-ahụ otu akụ nke na-egosi trajectory nke ahụ ga-ewere bọl golf, ọ nwere nrụrụ ya na-emegharị na mpaghara.
Nke ahụ bụ, anyị ga-enwe idozi nke ọma trajectory nke bọọlụ bọọlụ ga-eme. N'adịghị ka egwuregwu golf ndị ọzọ ebe ọ fọrọ nke nta ka ihe niile dị larịị, dị ka ọ na-eme na Golf SkiesN'ebe a, ọdịiche dị na mbara ala ga-egwu megide anyị ma ọ bụ na ihu ọma anyị ma ọ bụrụ na anyị maara otu esi achịkwa ike na trajectory nke ịtụfu.
Kwalite klọb gị ma mepee sekit ọhụụ
Banyere usoro mmeghe, ọ yiri ndị ọzọ. Anyị ga-eji mmegharị nke mpụta iji dozie trajectory na mmegharị elu maka ike nke igba egbe, ọ bụ ezie na ọ ga-kwuru na akụ a bụ nnọọ kpọmkwem na anyị ga-akpachara anya na njedebe nke ya rute oghere ma ọ bụrụ na anyị na-ama na ikpeazụ gbaa.
Ma ọ bụ na mfe anyị nwere ike ịbụ obere oge mgbe anyị banyerechara oghere ahụ ga-eju gị anya na ogo nke egwuregwu a na-akpọ golf golf nwere ike inwe.
Mgbe ahụ anyị nwere ọdịnaya freemium niile ahụ ka anyị nwee izu na izu nke egwuregwu. Banyere ihe ekwuru banyere «na ezigbo oge "na paragraf nke abụọ, ọ bụ eziokwu na ọ naghị edo anyị anya nke ọma ma mgbe anyị" hụrụ "onye ọkpụkpọ ọzọ Ọ dị adị ka ọ bụ naanị vidiyo nke onyinyo ya ...
Na ịkwụ ụgwọ iji merie
Anyị nọ n'ihu onye ọzọ nke egwuregwu ndị ahụ nke na-adọta kaadị anyị anyị nwere ike inwe ọganihu ngwa ngwa ma chekwaa izu na izu nke egwuregwu. Ka o sina dị, na dị ka ọtụtụ ndị egwuregwu na-akwado, ha na-egwuri egwu ruo ọtụtụ afọ na-etinyeghị penny nke euro, n'ihi ya, ọ dị gị mkpa otu ị chọrọ ịzụlite ya.
Ihe osise ọ dị ezigbo mma ma anyị hapụrụ ọdịiche ndị ahụ nke mere na ọrịa strok anaghị adị mfe dịka ọ na-eme n'egwuregwu golf ndị ọzọ. Dị ka ihe niile, a na-emepụta ahụmịhe egwuregwu na-atọ ụtọ ma ọ bụ otu n'ime ndị anyị nwere ọdịnaya zuru ezu iji tinye ya maka oge.
Golf nsogbu abụghị egwuregwu ọhụrụ maka gam akporo, ma o kwesịrị ime ka ọ gafee ahịrị ndị a ịhapụ akara nke ngafe ya site na egwuregwu golf dị ka otu n'ime ihe kachasị mma anyị nwere na gam akporo; mgbe niile site na arcade na freemium n'ọnọdụ.
Na freemium ọ bụla, ọ bụ ihe egwuregwu golf mara mma nke nwere ọtụtụ ọdịnala iji mee ka ihe sie ike mgbe ị na-akụ.
Usoro edemede: 6,4
Ogo nke ala
Ọtụtụ klọb na sekit na-egwu maka ọnwa
Igwa ndị ọzọ okwu
O doro anya na ọ bụ n'oge
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Soro ọtụtụ puku ndị egwuregwu na-ekpori ndụ Golf Clash
Arcadium 2 bu ohuru ohuru 'ha na-eri ogwu ma mara nma n'udi ya nile
Igodo atọ mere PUBG: New State nwere ike ịbụ njedebe nke PUBG Mobile